डन्डीबियोमै खुम्चिएको डमरु- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
डन्डीबियोमै खुम्चिएको डमरु
डमरु भनिने डम्बर डन्डीबियो खेललाई विश्वस्तरमा चिनाउने भनेर लागि परे पनि अन्तमा प्रतियोगिता जित–हारमा आएर टुंगिएको छ ।
जेष्ठ ५, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — कथा वाचनलाई रोचक बनाउनका लागि अपनाइने केवल एउटा रूप हो, जानरा । ‘डमरुको डन्डीबियो’ लाई लेखक खगेन्द्र लामिछानेले बाबु र छोराबीचको कथालाई स्पोर्ट्स ड्रामा जानरामा रहेर वाचन गर्ने जमर्को गरेका छन् । त्यसका लागि लामिछानेले देशको मौलिक र लोपोन्मुख खेल डन्डीबियोको सहारा लिएका छन् ।
जनमानसबाटै हराउँदै र बिर्सिंदै गएको डन्डीबियो खेललाई नै द्वन्द्वको मुख्य कारक बनाएर कथालाई सशक्त रूपमा भन्नु चानचुने काम पक्कै होइन । यस मानेमा लेखक लामिछाने र निर्देशक छेतेन गुरुङले एक अर्थमा दुस्साहस गरेकै हुन् ।
भर्खरै स्नातकोत्तर सकेर गाउँ आएको डम्बर (खगेन्द्र) को सपनाको स्पिड चढेको मोटरसाइकलको भन्दा तेज छ । ऊ डन्डिबियो खेललाई पुन:स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सपना बुन्दै छ । तर, जब ऊ आफ्नै बाबु योगेन्द्र (अनुप) सँग ठोकिन पुग्छ, सपनामा ब्रेक लाग्छ । योगन्द्र छोरालाई सरकारी जागिरमा होस् भन्ने चाहन्छ । त्योभन्दा बढ्ता डम्बर डन्डीबियोमा रुमल्लिएर आफूले जस्तै जीवन बर्बाद नगरोस् भन्ने ठान्छ । कुनै बेला योगेन्द्र पनि डन्डीबियो खेललाई त्यसरी नै सबैसामु चिनाउने भनी सरकारी अड्डा धाएको रहेछ । तर, केही सीप लागेनछ । सारा प्रयास खेर गएपछि उनको डन्डीबियोसगै वितृष्णा जागेको रहेछ । यस्तोमा सुरुआती चरणमा लागेको ब्रेकपछि डम्बरको सपनाले फेरि गति लिन सक्ला ? तर फिल्म उत्तराद्र्धमा पुग्दा मूल मुद्दाबाट विषयान्तर भएको भान हुन्छ ।
गाउँको स्कुलका हेडमास्टर समेत रहेका योगेन्द्र सार्वजनिक रूपमै डन्डीबियो खेल्नेका पिंडुलाका मासु झार्ने घोषणा गर्दैगर्दा डम्बरकै सपना चुनौती बनेर तेर्सिन्छ । पटकथाले डन्डीबियो खेलप्रति योगेन्द्रको घृणा र डम्बरको प्रेमलाई गहिराइसम्म छुन नसक्दा दुईबीचको टकराव वजनदार बन्न सकेको लाग्दैन । हो, हाम्रो समाजमा अझै पनि खेल्दा पढाइ बिग्रन्छ भनेर अभिभावकले छोराछोरीलाई खेल्न दिंदैनन् । तर, योगेन्द्रले त जीवन नै बिग्रन्छ झैं गरिरहनुमा खास ठूलो कारण खुल्दैन । जबकि कुनै बेला उनकै बुबाले डन्डीबियो खेलका लागि भनेर चौर नै दानमा दिएका हुन्छन् । अहिले त्यो चौरमा केटाकेटीहरू फुटबल खेल्छन् । फुटबल खेलेर पढाइ वा जीवन बिग्रेला भन्ने कसैको चिन्ता छैन ।
सबा दुई घन्टाको फिल्मले जति गहन यात्रा गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । डमरुले डन्डीबियो खेल्न खोज्ने टिम सदस्य र उनीहरूका समस्याले डमरुको सपनामा पुर्‍याउने बाधाको आरोह–अवरोह सपाट लाग्छ । बालसखा मुखिया (बुद्धि) को डन्डीबियोप्रति सोचमा आउने युटर्न डम्बरलाई धेरै दु:ख नदिऊँ भन्ने टाइपमा सहज बनाइएको छ । र, गाउँमै चियादोकान खोलेर बसेका पण्डितको योगेन्द्रप्रतिको असहमति पनि उदेकलाग्दो छ । कुनै बेलासँगै डन्डीबियो खेल्ने साथी भए पनि अहिले भने ऊ योगेन्द्रले डन्डीबियो खेलाएर आफ्नो जीवन बर्बाद भएको ठान्छ र उसलाई बदला लिन छोरी निर्मला (लक्ष्मी) हतियार बनाएर लागिपर्छ । लक्ष्मी बिनाकारण बलिको बोको बन्दै गर्दा पनि किञ्चित दु:खमनाउ गर्दिन । कुनै एक संवादमा छोरीले बाबुलाई भनेकी हुन्छे, ‘बाबा, तपाईं त कस्तो फिल्मकै भिलेनजस्तो ।’ लाग्छ, फिल्मले दुवै बाबुछोरीलाई भिलेनको कर्तव्य निर्वाह गर्न खटाएको छ ।
डमरु भनिने डम्बर डन्डीबियो खेललाई विश्वस्तरमा चिनाउने भनेर लागि परे पनि अन्तमा प्रतियोगिता जित–हारमा आएर टुंगिएको छ । उनी डन्डीबियो खेलमै रुमल्लिन पुगेका छन् । ‘मैले ठूलो लडाइँ लड्दै छु’ भन्ने डमरु खेलकै नतिजामा भर पर्नु उसको सपनाको उद्देश्य पक्कै हैन । यस्तो लाग्छ, ऊ डन्डीबियो खेल्ने टिम निर्माणका लागि मात्रै गाउँ पसेको छ । टिम निर्माणमा गरेको संघर्ष, नयाँ नियम बुझाउन गरेको मिहिनेत र प्रतियोगितामा पाएको सफलतामै उसको चरित्रको ग्राफ समेटिएको छ ।
बरु डम्बरको सपना जान, अन्जानमा फिल्मकै अर्की पात्र जो बेलायतदेखि थेसिसका लागि भन्दै डन्डीबियोको रिसर्चमा भिडियो क्यामेरा बोकेर आएकी छे, उसमा सिफ्ट भएको छ । उसले डमरुले डन्डीबियो खेलका लागि गाउँमा गरेको तयारीदेखि खेलसम्मलाई खिचेर युट्युबमा राखिदिएकी थिई । यसैका आधारमा भिडियो भाइरल भएर डन्डीबियोले जाग्ने मौका पाएको थियो र अन्तरदेशीय डन्डीबियो प्रतियोगिता सम्भव हुन्छ । यस अर्थमा फिल्मको असली नायक उनै भएकी छन् । अभिनय सन्तोषजनक रहेको फिल्मको छायांकनमा मिहिनेत झल्कन्छ । पृष्ठभूमि संगीतले खासगरी डन्डीबियो प्रतियोगिताको सनसनीलाई केही माथि उठाउन खोजे पनि यसको कोरियोग्राफीमा पर्याप्त अभ्यास नहुँदा खेल सनसनीपूर्ण बन्न भने सकेको छैन ।
तर पनि ‘डमरुको डन्डीबियो’ बन्नु तारिफयोग्य कदम हो । नवीन कथा, ग्रामीण सेटअप र इमानदार प्रस्तुति प्रशंसायोग्य कदम हुन् । व्यावसायिक सम्भावना न्यून भए पनि राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने यस्ता विषयमा निजस्तरमा चालिने यस्ता कदम पक्कै सराहनीय हुन् । तर, ‘डमरुको डन्डीबियो’ निर्माणको प्रशंसा गरिरहँदा फिल्म नै भने सशक्त हुनबाट चुकेको छ । सबै असल प्रयास उम्दा हुँदैनन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, ‘डमरुको डन्डीबियो’ ।
खगेन्द्र लामिछाने, अनुप बराल, मेनुका प्रधान, लक्ष्मी बर्देवा, बुद्धि तामाङ, अंकित खड्का, आशान्त शर्मा
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०८:०२
बाबुछोरीको दशकपछिको गफ
वैशाख ९, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — नायिका केकी अधिकारी करिअरको सुरुवाती दिनमा निर्देशक बाबु बद्री अधिकारीका कारण बढी चिनिन्थ्यो । जब जब केकीको अभिनयको तारिफ हुन्थ्यो, जस बाबु बद्रीलाई जाने गर्थ्याे ।
घरमै कलाको माहोल भएकोले पनि केकीको क्षमता पुस्टिन पाएको हुन सक्ने अनुमान लगाइन्छ । तर वास्तविकता भने केही फरक छ । यी बाबुछोरीबीच मुस्किलले बातचित हुने रहेछ । आफू अभिनीत मात्रै नभई पहिलो पटक निर्माण थालेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ शुक्रबारको रिलिज छेको पारेर केकी बुबासाथ हालै कुराकानीमा देखिइन् ।
‘बाबुछोरीको बिहान त जहिल्यै भेट हुन्छ तर गफ गर्ने वातावरण भने प्राय: बन्दैन’ केकीले सुरुमै यसो भनेपछि बाबुले पनि थपिहाले, ‘खाना खान बसेको बेला मुस्किलले दुई मिनेट कुरा हुन्छ होला, नत्र अहँ ।’ त्यो पनि फिल्मकै विषय उप्कियो भने मात्र बातचित केही लम्बिने रहेछ । त्यस्तोमा फिल्म रिलिज सम्मुखमा आइपुग्दाचाहिँ बाबुसँग केकीले कत्तिको सरसल्लाह लिइँदिहुन् ? ‘म यसो गर छोरी पनि भन्दिनँ । ऊ पनि के गरौं बाबा भनेर सोध्दिनँ’ केही वर्षअघि आफैंले ‘ज्यान हाजिर छ,’ फिल्म निर्माणमा असफलता भोगिसकेका बद्रीले सिधासिधा भनिदिए, ‘खुरुखुरु स्क्रिप्ट लेख्नु र निर्देशन गर्नुभन्दा निर्माण गर्नु गाह्रै रहेछ । फेरि त्यो बेलाको तरिका अहिले काम पनि लाग्दै छ ।’ केकी भने बाबालाई सोधेर फेरि पुरानै तनाव बल्झाउन मन पनि नलाग्दो रहेछ । बाबुछोरीले एकअर्काको मन राखिदिने बहानामा सञ्चारविच्छेद हुने रहेछ ।
केकीले आफ्नै जुनकिरी आर्टस्बाट ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाउने तय भएपछि पनि बद्रीले सुरुमा नाम मात्रै छोरीको राखिएको होला भन्ने लागेको रहेछ । ‘त्यसैले पनि त्यो बेला हल्का रूपमा लिएँ । पछि मिडियामा नै आएपछि पो बल्ल थाहा पाएँ ।’ त्यसो त बद्री छोरीका अधिकांश खबर समाचार पढेर नै थाहा पाउँछन् । तर यसमा उनलाई छोरीसँग चित्त दुखाइ भने छैन । बरु एकाध महिनादेखि छोरीको खटन नजिकबाट नियालिरहेका रहेछन् । ‘तनाव पनि अर्कै खालको छ । देखाउन नखोजेको जस्तो’ तर यो समयको खट्न आवश्यक पनि भएको भन्दै उनी आफैंलाई चित्त बुझाएर बस्छन्, बद्री । निर्माता बनेपछि केकीलाई पनि कहिलेकाहीं ओभर फ्रस्टेसन र तनावले सताउने रहेछ । उनी पनि बुबाले भनेझैं यसलाई क्षणिक ठान्छिन् । ‘यो मोमेन्टरी हो । पछि त चाहेर पनि तनाव लिन पाइँदैन भन्नेजस्तो पनि लाग्छ,’ केकी भन्छिन्, ‘आफ्नै रहरले समातेको विधा भएकोले फिल्म निर्माणको कामबाट आउने तनाव पनि आफैंले नै लिनुपर्छ, भोग्नुपर्छ । हरेक निर्माता यो फेजबाट गुज्रेकै हुन्छ ।’
अभिनयमा नै चम्किरहेका बेला निर्माणमा हात हाल्दा केकीलाई धेरैले हतार गरेको पनि भने । तर उनी राइट टाइममा भन्दा पनि ऊर्जामा विश्वास गर्छिन् । शरीरमा जोस छँदै सुर गरिहालें भन्दै थपिन्, ‘जहिले सुरु गरिन्छ त्यही टाइम नै राइट बनाउन लागिपर्ने हो ।’ केकीले आफ्नो निर्माण कम्पनी मास्टर प्लानअन्तर्गत ल्याएको बताउँछिन् । ‘प्रोडक्सन हाउस खोल्ने म एक्लैको सपना होइन । यसमा बाबाले पूरा गर्न नपाएको सपना पनि साकार पार्नेछु । आफ्ना लागि पनि कहिल्यै नलेखिएको कथाहरू लेख्नेदेखि आफूले भन्न चाहेको, सुन्न चाहेको कथाको नयाँ प्लाटफर्म सृजना गर्ने सपना हो,’ छोरीले यसो भनिरहँदा आडैमा बद्री दंग देखिए । ‘एक दुइटा एम्बिसियस प्रोजेक्ट साँचेर राखेको छु । बेस्ट फिल्म त अझै बनेकै छैनन् र त्यो मैले नै बनाउने हो भनेर चित्त बुझाइरहेको छु । करिब सात/आठ वर्षदेखि यी कुरा मेरो दिमागमा आइरहेका छन् । तर छोरीलाई कहिल्यै सेयर गरेको थिइनँ । अब हेल्प गर्ने छोरी पाएँ । मेरो सृजना बुझ्न सक्ने, वातावरण बनाउन सक्ने साथी पाउने भएँ । त्यो सबैभन्दा खुसीको कुरा ।’ बाबाका कुराले अचम्म मानिरहेकी केकीले थपिन्, ‘यो अन्तर्वार्ताको रमाइलो, आज बाबाका कतिपय कुरा मैले पनि थाहा पाउँदै छु ।’
सुरुवातमा बद्रीलाई छोरी यो फिल्डमा धेरै डिभोटेड, प्यासोनेट नहोस् भन्ने लाग्थ्यो रे । स्वयम् केकी भन्छिन् । ‘त्यसैले मैले पनि आफ्नो कामबारे खासै सेयर गरिनँ । यसैले नै ग्याप बढ्दै गयो । अहिले त बाबा नै मेरो कामको पहिलो समालोचक हो,’ केकीले भनिन्, ‘बाबालाई यो फिल्डको स्ट्रगल धेरै थाहा छ । त्यसैले पनि मैले यस्तो काम थाल्दै छु भन्दा अक्वार्ड लाग्ला भनेजस्तो पनि लाग्छ ।’ तर बद्रीलाई केकीको अभिनय भने मन पर्दो रहेछ । खासगरी ‘लभ साशा’ मा उनले गरेको अभिनय बढी रियालिस्टिक मान्दा रहेछन् । बरु केकी नै भने आफूलाई ओभर एक्टको सिकार हुने ठान्छिन् । कुराकानी बिट मार्ने बेला केकीले थपिन्, ‘मेरो कामलाई लिएर यसरी बाबासँगै कुरा भएको करिअरको दस वर्षको अवधिमा आज पहिलो पटक होला ।’
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:५९